အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအီးမေးလ်ဒီဇိုင်းသစ် (လိုအပ်သည်) | Martech Zone
ဤတွင်ကျွန်ုပ်ရရှိလိုသောအီးမေးလ်နောက်တစ်ခုရှိသော်လည်းများသောအားဖြင့်မည်သည့်အရာမျှလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ ဒါက Indianapolis မြို့လယ်၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအီးမေးလ်အသစ်.
ငါအသစ်တစ်ခုဒီဇိုင်းထွက်လာ - မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ subscribe နေဖို့ မြို့လယ် Indianapolis မြှင့်တင်ရန် အားလုံးရှိပေမယ့်ဒီဇိုင်းကိုအီးမေးလ်ကိုဖတ်လို့မရအောင်နှင့်အသုံးမပြုနိုင်စေသည်။ ဘာကြောင့်လဲ
အဓိကသတင်းအချက်အလက်တွင်အမှန်တကယ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အဓိကချိတ်ဆက်မှုမရှိပါ Indy Downtown Inc. ဒါကကြီးကြပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်လိုအပ်တယ်ထင်တယ်။
ခေါင်းစီးရှိပုံများသည်အလွန်သေးငယ်ပြီးအသုံးမ ၀ င်ပါ။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုမထုတ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာမည်သူမဆိုအီးမေးလ်ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူသည်ကျွန်ုပ်ထက် ပို၍ သေးငယ်သည့် resolution ရှိနိုင်သည်၊ သူတို့ဟာ 'ခြံအထက်' တန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာကိုယူပြီးလူတွေအမှန်တကယ်နေရာယူနေကြတယ် နိုင် သူတို့ဖောက်သည်ထဲမှာအီးမေးလ်ဖွင့်တဲ့အခါကြည့်ပါ။
ဘယ်ဘက်ရှိပထမစာပိုဒ်၊ IDI မှစကားလုံး, ညံ့ဖျင်းခေါင်းစဉ်နှင့် uncompelling ။ ရှေးရှေးတုန်းကဆိုရင် IDI ဆိုတာတောင်မှမသိကြဘူးလား။
စာလုံးအရွယ်အစားဟာအလွန်သေးငယ်သော၊ မဖတ်နိုင်သေးသောအရာများဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏မျက်လုံးများမှအကြောင်းအရာကိုလွဲချော်ရန်အတွက်စာပိုဒ်ခွဲများသို့မဟုတ်ကျည်ဆံများမရှိပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်တော်မဖတ်ပါ။ အဆိုပါပုံရိပ်သော်လည်းအလွန်ကြီးစွာသောခေါ်သံပဲ!
ပြက္ခဒိန်ဖြစ်ရပ်များသည်ဤအီးမေးလ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိူင်သည်။ သို့သော်ဖြစ်ရပ်များကိုအရေးယူရန်ခေါ်ဆိုခြင်းမရှိပါ။ လက်မှတ်များကိုဝယ်ယူရန်နှင့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များရရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုလင့်ခ်ပေးပါ။ ငါဒီမှာဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုမြင်သွား Google ကရှာရန်ကြိုးစားသွားပါလိမ့်မယ်။ ငါ့အတွက်အချိန်မရှိဘူး။
ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုမလိုအပ်ဘဲပါးလွှာသောကော်လံများထဲသို့ဖြိုခွဲပြီးခွဲထုတ်လိုက်သည်။ လူများသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော resolution များဖြင့်ယခုပိုမိုကြီးမားသောမော်နီတာများသို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ 800 မှ 1000 pixel wide format သို့ပြောင်းရွှေ့သည်။ သင်၏ပြက္ခဒိန်သည်ညာဘက် sidebar ဖြစ်သောကြောင့်အသုံးပြုသူသည်ဘေးဘားသို့ရောက်ရှိရန်နှင့်၎င်းကိုဖတ်ရန်အလျားလိုက် scrolling လုပ်ရန်စိတ်မထားပါ။
အီးမေးလ်ကိုအရေးယူရန်အနည်းဆုံးဖုန်းခေါ်ဆိုရန်လိုအပ်သည်။ မင်းငါ့ကို City Market ကိုလည်ပတ်စေချင်သလား။ ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်ဝယ်ပါလား။ ငါ့ကိုရွေးစရာအစားရွေးစရာတစ်ခုထက်ထူးခြားစွာခေါ်ဆိုပါ။ ငါ့ကိုထိုနေရာတွင်မောင်းနှင်မည့်အခြားအရာအားလုံးထက်တစ်ခုအကြောင်းထပ်ပြောပါ ဦး ။
အကယ်၍ သင်အခန်းကိုစိတ်ပူနေပါက landing စာမျက်နှာများနှင့်ကောက်နှုတ်ချက်များထည့်သွင်းပါ။ ငါ့ကိုအသက်ရှူခန်းနှင့်ထပ်ဆင့်သတင်းအချက်အလက်များပါသောစာမျက်နှာသို့ပို့ဆောင်သော 'ပြည့်ဝသည့်ဇာတ်လမ်း' ကိုလင့်ခ်ဖြင့်ကောက်နုတ်ချက်တိုတစ်ခုကိုရေးပါ။
လူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဘယ်မှာလဲ။ ဒီအီးမေးလ်မှာလူတွေရဲ့ပြုံးနေတာကိုမတွေ့ရတာကြောင့်ငါဘရိုရှာဒါမှမဟုတ်သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်နေသလိုခံစားရတယ်။ Indy မြို့လယ်ရှိဤအဖြစ်အပျက်များနှင့်နေရာများကိုနှစ်သက်သူများ၏ဓါတ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်လိမ့်မည်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ စာဖတ်သူတွေကသူတို့ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုစာဖတ်သူတွေရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့အီးမေးလ်မှာမြှင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုကိုပြန်လည်စုစည်းခြင်းကရော။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပါ
ကျွန်တော့်အချက်ကဒီအီးမေးလ်ကိုပိတ်ထားဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ အရမ်းကောင်းတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။ မိတ္တူကူးရေးသောလူများသည်သူတို့၏အိမ်စာကိုလုပ်ကြသည်ကိုထင်ရှားစွာတွေ့ရသည်။ စာဖတ်သူများသည်၎င်းကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတင်ဆက်မှုလိုအပ်သည်။
Tags: adwords အရည်အသွေးကိုရမှတ်ဂူဂဲလ် adwords အရည်အသွေးကိုရမှတ်.htaccessလိုဂိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းမိုဘိုင်းအဓိပ္ပါယ်များwww မဟုတ်ပါအရည်အသွေးရမှတ်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်website ကို optimizationwww
Cisco သည် I-Prize ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update ကို
ဇွန် 25, 2008 မှာ 7: 32 pm တွင်
ငါကဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ / စာရေးသူဖြစ်ခဲ့ရင်ငါ def ။ အနည်းဆုံး 1/2 အားဖြင့်မိတ္တူဖြတ်ရ၏။ ဆောင်းပါးအချို့ကိုအခြားစာမျက်နှာတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။